IK4 ▷ ➡️ - Dhammaan wixii ku saabsan ciyaaraha fiidiyowga iyo kombuyuutarrada ➡️
Sidee looga soo kabtaa
Internetka iyo Browsers-ka
Amniga iyo Fayraska
Sidee loo lumiya miskaha usbuuc gudihii?
Sidee loo dhejiyaa laabta eeyga?
Sidee lagu ogaan karaa haddii bisadheygu gudaha ku leedahay kittens badan?
Waa maxay qorradu maxayse quudisaa?
Sidee loo dareemin dembiile?
Sidee loo kordhiyaa miisaanka iyo cufka muruqa?
Sida loo sameeyo warqad origami?
Sidee loo sameeyaa duugista nasashada?
Sidee loo helaa go'aamiyaha matrixka 3×3?
Sidee loo noqdaa meeris dhab ah?
Sidee loo sameeyaa dabinnada shimbiraha yaryar?
Sidee loo dhigaa vocho waqtiga?
Sidee loo ciyaara badminton?
Sidee loo bilaabo afar geesle?
Sidee loo sameeyaa dheriyo caag ah oo tallaabo tallaabo ah?
Sidee loo jabsadaa Wii-gayga?
Sida loo sameeyo vinaigrette Talyaani?
Sida loo soo dejiyo Snapchat
Sidee loo sameeyaa laambad guriga lagu sameeyo oo aan koronto lahayn?
Sida loo kaydiyo xogta ka hard drive ka hor formatting?
Sidee lagu ogaan karaa meesha ay iga soo wacaan?
Sidee loo sameeyaa maaskaro kartoonada maalinta dadka dhintay?
Sida loo sameeyo digaag shiilan oo karsan guriga?
Sidee looga takhalusaa wareegyada mugdiga ah?
Sideed qaaddo ugu duuduubtaa indho-xidhahaaga?
Sidee loo sameeyaa saqafka baabuurka miisaaniyada?
Sidee loo sameeyaa nin dumar ah oo jacayl ku dhaca?
Sidee lagu ogaan karaa inta carruur ah ee aan ku dhali doono xariiqyada gacanta?
Sidee loo hawlgeliyaa qanjidhada pineal?
Sidee meesha looga saaraa cilladaha?
Sidee looga gudbaa kaadida ka hortagga doping?
Sidee loo yareeyaa caloosha si degdeg ah?
Sidee loo xidhaa daboolka afka?
Sidee looga takhalusaa cawska?
Sidee loo soo jiitaa saaxiibkeygii hore?
Sidee loo beeraa moringa?
Sidee degdeg looga saaraa xuub-jabka wejiga?
Sidee dib loogu buuxin karaa kartridges khad HP?
Sidee naag loogu waashaa galmada?
Sida loo afeeyo sanka qurxinta?
Sidee loo dhigaa qoraal-hoosaadyada SRT?
Sidee loo sameeyaa matte rinjiyeynta dhalaalaya?
Sidee loo sameeyaa galmo degdeg ah?
Sidee loo abuuraa xiisad galmo?
Sidee loo nadiifiyaa birta daxalaysan?
Sidee u neefsadaa sac?
Sidee bay Brazil uga hadlaan?
Sidee loo sameeyaa tattoos guri?
IPhone Xiriirada la jecelyahay: Maxay yihiin iyo Sida Si sax ah loogu dejiyo
Xidhiidhada ay jecel yihiin iPhone: waxa ay u yihiin iyo sida saxda ah loo dejiyo Shaqada abuurista xidhiidhada la jecel yahay ayaa laga heli jiray taleefanno badan oo gacanta ah qiyaastii 15 sano ka hor, laakiin waagaas waxaa loo sameeyay ujeedada kaliya ee awood u leh in ay si dhakhso ah u garaacdo lambarka la rabo . Nidaamyada hawlgalka mobilada ee casriga ah, "Favorites" ee ku jira hagaha... read more
Xiriirada aan la magacaabin ee ku saabsan iPhone: Waa maxay sababta iyo sida loo hagaajiyo?
Xiriirada aan magaca lahayn ee iPhone: sababta iyo sida loo hagaajiyo? Dhibaatada soo dejinta liiska xiriirada ee iPhone adeegyada dhinac saddexaad ama kaarka SIM waa wax caadi ah oo inta badan waxa ay u muuqataa sida magacyo maqan (kaliya tirooyinka lambarada ayaa la soo bandhigay). Isku mid … read more
Khaanadaha la jaan qaadi kara - Sida looga fogaado Daabacaadda oo Xidhan
Kartridges ku habboon: sida looga fogaado xannibaadda daabacaadda Qaar ka mid ah moodooyinka daabacaha ayaa kaliya kuu oggolaanaya inaad isticmaasho kartoonada asalka ah daabacaadda. Annaga, haddaan nahay QuimeraRevo, si kastaba ha ahaatee, waxaan go'aansanay inaan sameyno hage aan ku sharaxno sida looga fogaado xannibaadda daabacaadda haddii aad rabto inaad ku rakibto kartoonada ku habboon. Kaliya waa inaad xisaabta ku dartaa macluumaadka... read more
Xiriirrada VIP: Sida Loo Dejiyo Liiska Emailka Muhiimka ah ee Boosta oo ku saabsan iPhone, iPad, iyo Mac
Xidhiidhada VIP: Sida Loo Sameeyo Liiska Iimayllada Muhiimka ah ee Boostada ee iPhone, iPad, iyo Mac Helitaanka xidhiidhada ku jira abka Boostada waxa aad loo fududayn karaa iyadoo la siinayo heerka VIP-da. VIP (Qof Aad Muhiim u ah, oo loo turjumay "Qof Aad Muhiim u ah") ayaa lagu muujiyay sanduuqa-mailka ee… read more
Spotify dillaacday IOS 2021: Sida loo rakibo
Spotify Cracked iOS 2021: Sida loo rakibo Xusuusnow maalmihii hore ee wanaagsanaa markii ay ahayd inaad soo dejiso app Safari si aad bilaash ugu isticmaasho Spotify iPhone kasta? Hagaag waa inaad ogaataa inaad weli samayn karto maanta. Abuuraha adeegga faneedka ugu caansan adduunka, isagoo... read more
PirateBay: beddelka ugu fiican ama sida loo galo goobta
PirateBay: Beddelka ugu fiican ama sida loo galo The Pirate Bay (sidoo kale loo yaqaan TPB) waa goobta durdurka ah ee qof kasta oo xiiseeya ay tahay inuu wax ka ogaado, dhab ahaantii waxay isu yeertaa marinka ugu xoogan shabakada. Bay dhab ahaantii waa machad, goobta waxaa aasaasay Xisbiga Pirate Party… read more
Xeerka Ciladda Maareeyaha Adeegga 7000, 7001, 7009, 7011, 7023, 7031, 7034, 7043 ee Windows 10 - Maxaa laga Filayaa iyo Sida loo Xaliyo
Khaladaadka Maareeyaha Xakamaynta Adeegga 7000, 7001, 7009, 7011, 7023, 7031, 7034, 7043 gudaha Windows 10: waxa la filayo iyo sida loo hagaajiyo Haddii aad ka mid tahay isticmaalayaasha eega muuqaalka dhacdada Windows 10 (Win) +R - Eventvwr.msc) si loo falanqeeyo khaladaadka, dhammaan suurtogalnimada waxaad ka heli doontaa khaladaad… read more
Waa maxay cabirka pixel-ka ee xaashiyaha A4, A3, A2, A1 iyo A0 ee ku saleysan DPI?
Waa maxay cabbirka pixel A4, A3, A2, A1 iyo A0 ee ku salaysan DPI? Ku dhawaad ​​dhammaan isticmaaleyaasha PC-ga casriga ah iyo mobilada ayaa wax ka og xallinta waxayna kala garan karaan farqiga u dhexeeya kamarad dareeme wanaagsan, muuqaal la socon kara iyo muuqaal tayo wanaagsan leh… read more
Maareeyaha Hawlaha Mac OS iyo Beddelka Nidaamka Kormeerka
Maamulaha Hawsha Mac OS iyo beddelka nidaamka la socodka Novice Mac OS isticmaalayaasha badanaa waxay la yaaban yihiin: aaway Maareeyaha Hawsha Mac iyo waxa kiiboodhka gaaban bilaabay, sida loo isticmaalo si loo xidho barnaamijka sudhan, iyo wixii la mid ah. La yaabka ugu khibradda badan sida loo abuuro… read more
Maxaa la sameeyaa haddii sawirradu ka baaba'aan gallery-ka 'Android'
Maxaa la sameeyaa haddii sawiradu ay ka lumaan gallery-ka Android Mararka qaarkood talefannada casriga ah ee Android, waxaa laga yaabaa inaad la kulanto dhibaato: waxaad furaysaa "Gallery" laakiin dhammaan sawirada waa maqan yihiin. Waxaan rabnaa inaan kuu sheegno waxaad sameyneyso kiisaskan. Sababaha iyo dariiqooyinka loo xalliyo dhibaatada Sababaha fashilkan waxa loo qaybin karaa laba qaybood:… read more
Sidee loo beddelaa e-maylka 'Supercell id'?
Sida loo beddelo iimaylka aqoonsiga Supercell? Dadka taageerayaasha u ah Isku dhaca Qabiilada, waxaa suurtogal ah in ay ku raaxaystaan ​​waxyaabo cusub oo kaa caawin doona inaad gaadho natiijooyin wanaagsan. Ma awoodi doontid oo kaliya inaad ka beddelato iimaylka Aqoonsiga Super Cell, laakiin sidoo kale waxaad ku xidhi kartaa aalado badan si aad ugu raaxaysato ciyaarta adigoon… read more
E_FAIL 0x80004005 qalad kujira VirtualBox - sababaha iyo xalka
E_FAIL 0x80004005 qaladka VirtualBox - sababaha iyo xalalka Isticmaalayaal badan ayaa la kulma qaladka E_FAIL 0x80004005 laga bilaabo MachineWrap, MediumWrap iyo qaybaha kale marka la bilaabayo iyo xaaladaha qaarkood ka hor inta aan la bilaabin mashiinka farsamada ee VirtualBox, iyada oo aan loo eegin nidaamka hawlgalka ee lagu rakibay (Windows 10 iyo ka hor) Linux, Linux iyo kuwa kale). Casharradan ayaa faahfaahinaysa... read more
Family Link - qalabku wuu xirnaa, lama furi karo - maxaa la sameeyaa?
Family Link - qalabku wuu xidhan yahay, lama furi karo - maxaa la sameeyaa? Ka dib markii la dhajiyay maqaal ku saabsan xakamaynta waalidka Android ee barnaamijka Family Link, si joogto ah ayaa loogu sheegay faallooyinka in ka dib isticmaalka ama xitaa dejinta Family Link, telefoonka ilmuhu wuxuu ku dhamaanayaa quful read more
Sida loo xaliyo HDMI aan shaqeynayn adabtarada VGA
Sida loo hagaajiyo HDMI jaban ee adabtarada VGA Isticmaalayaasha leh kormeerayaasha da'da weyn waxay inta badan la kulmaan la'aanta isku xirka isku xirka dhijitaalka ah ee kaararkooda fiidiyowga cusub. Xaaladdan oo kale waxaa jira hal xal oo keliya: isticmaalka qalabyada gaarka ah iyo beddelayaasha. Shaqadeeda saxda ah waxay si toos ah ugu xidhan tahay… read more
Sida loo saxo qaladka "Wuxuu u baahan yahay ficil kootada Google"
Sida loo hagaajiyo ficilka xisaabta Google ee loo baahan yahay qaladka Habka 1: Tirtir akoontada Talaabada xisaabta ee ugu caansan ayaa loo baahan yahay qalad. Ka Google wuxuu ku dhacaa aaladaha Android sababtoo ah tirtirka dhammaystiran ee akoontiga, kaas oo laftiisa lagu xidhay taleefanka casriga ah. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda… read more
Waa maxay sababta dhawaqa ringtone uu uga hooseeyo iPhone 12, 12 Pro, 11, 11 Pro, XS, XR iyo X iyo sida loo demiyo
Waa maxay sababta dhawaaqa ringtone uu uga aamusan yahay iPhone 12, 12 Pro, 11, 11 Pro, XS, XR iyo X iyo sida loo damiyo Haddii aad haysato iPhone 12, iPhone 11 Pro, iPhone XR ama taleefan kasta oo Apple ah oo ku qalabaysan Wajiga Iskaanka aqoonsiga, waxa hubaal ah inaad dareentay in mugga... read more
Kii Ugu Dambeeyay ee PC ah: Horumarka laga gaadhay dhanka ku dayashada
Haddii aad jeclaan lahayd inaad tijaabiso ciyaar fiidiyoow ah oo ay ka buuxaan bini'aadam oo isu beddelay dad cun ah ka dib masiibo ka dhacday Mareykanka, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad akhrido maqaalkan soo socda ee Us Us PC, horumar weyn oo dhinaca ku dayashada ah, dhammaan xogta waxaad u baahan tahay inaad xakamayso si aad u ciyaarto oo aad u soo dejiso kombayutarkaga. The… read more
Sida loo furo "dukaanka shahaadada" ee Windows 7
Sida Loo Furo "Bakhaarka Shahaadada" gudaha Windows 7 Shahaadooyinku waa mid ka mid ah fursadaha amniga ee Windows 7. Waa saxiix dijital ah oo xaqiijinaya ansaxnimada iyo runnimada mareegaha, adeegyada, iyo aaladaha kala duwan ee nooc kasta ah. Shahaadooyinka waxaa bixiya hay'ad shahaado bixin ah. Waxay ku kaydsan yihiin… read more
Ka jooji faallooyinka qoraallada Facebook
Joojinta faallooyinka boggaga Facebook Bogga rasmiga ah iyo codsiga mobilada ee shabakada bulshada ee Facebook, waxaa jira habab badan oo lagula falgalo isticmaaleyaasha kale, oo ay ku jirto awoodda looga tago faallooyinka qoraallada kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, shaqadan si caadi ah ayaa loo curyaami karaa oo keliya meelaha qaar ee kheyraadka ama… read more
Sida loo shido nalka dambe ee kumbuyuutarka laptop-ka
Sida loo shido nalka dambe ee kumbuyuutarka laptop-ka Haddii aad u baahan tahay inaad shido nalka dambe ee kumbuyuutarka laptop-ka, laakiin aadan aqoon sida loo sameeyo, tilmaamaha hoose - macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan, furayaasha iyo isku-dhafka muhiimka ah si aad u leexiso. iftiinka dambe ee… read more
Sidee loo hagaajiyaa qaladka DF-DFERH-01 markaad ka soo kabanayso xogta serverka ku jira Android ee ku yaal Play Store
Sida loo saxo qaladka DF-DFERH-01 marka la soo saarayo xogta server-ka Android ee Play Store Mid ka mid ah khaladaadka ugu badan ee dhawaanahan ka dhaca taleefannada Android marka la soo dejinayo ama la cusboonaysiinayo apps-ka Play Market waa fariinta DF-DFERH-01 ee soo celinta xogta serverka "Ku celi" badhanka, kaas oo inta badan aan wax xalin. Tilmaantan ayaa faahfaahinaysa… read more
Ciyaaraha ku rakib PlayStation 3-ka adoo isticmaalaya USB stick
Ku rakibida ciyaaraha PlayStation 3-kaaga USB stick Sony's PlayStation 3 console game console ayaa wali aad caan u ah cayaartoyda maanta, inta badan waxaa sabab u ah jiritaanka ciyaaro gaar ah oo aan loo gudbin jiilka soo socda. Si aad codsiyada ugu rakibto si ku habboon, waxaad isticmaali kartaa kaydinta Flash. … read more
Ku daaq carousel-ka gidaarka gidaarrada casriga ah ee Xiaomi
Dami carousel warqadda gidaarka ah ee taleefannada casriga ah ee Xiaomi Ma aha qof kasta oo doorbiday taleefanka casriga ah ee Xiaomi inuu helo app-ka Carousel Wallpaper ee si toos ah MIUI OS xal ugu yahay dhibaatada qaabaynta shaashadda. Isla mar ahaantaana, iyadoo la eegayo fursadaha ballaaran ee waxka beddelka… read more
Sida loo abuuro muuqaal been abuur ah barta Instagram?
Sida loo sameeyo profile been abuur ah Instagram-ka? Haddii aad jeclaan lahayd inaad barato sida loo sameeyo profile been abuur ah shabakada bulshada ee caanka ah ee Instagram laakiin aadan garanayn sida loo sameeyo, uma baahnid inaad ka walwasho. Maqaalka soo socda ayaanu ku bari doonaa mid kasta oo ka mid ah tillaabooyinka aad raacdo si aad isku sawirto goobtan. Instagram ayaa noqotay… read more
Sidee loo hagaajiyaa Dib-u-hagaajinta oo xulo qalabka saxda ah ee saxda ah ama geli qalabka warbaahinta, Ma jiro qalab la qaadi karo iyo qalad la mid ah
Sida loo hagaajiyo Reboot oo u dooro qalabka saxda ah ama geliso warbaahinta boot, Ma jiro qalab bootable ah iyo qalad la mid ah qalabka boot ee la doortay. read more
Sawir buuxa oo xiriir ah inta lagu jiro wicitaan taleefanka iPhone ah - sideen ku sameeyaa?
Sawirka shaashadda oo buuxa ee xiriirka inta lagu jiro wicitaanka iPhone: sidee ayaan u sameeyaa? Buuga ciwaanka ee aaladaha casriga ah ma aha oo kaliya buug telefoon, laakiin waa faylka xidhiidhka si cadaalad ah u shaqaynaya kaas oo ka kooban ciwaannada iimaylka, isku xidhka, muuqaalada bulshada, ikhtiyaarka wacitaanka, iyo macluumaadka kale ee dadka. … read more
Sidee loo ogaadaa cidda baajisay fariinta barta Instagram?
Sidee lagu ogaan karaa cidda tirtirtay fariinta Instagram-ka? In kasta oo ay jiraan codsiyo badan oo la diro oo la helo fariimaha, Instagram waxaa loo tixgelin karaa mid ka mid ah kuwa ugu waxtarka badan oo ay door bidaan dadweynuhu. Madalkeeda aad ayay u fududahay in la fahmo, sidoo kale waxa ay ku daraysaa qalab aad u fiican oo aanay apps kale haysan. Maanta waxaan rabnaa inaan kaala hadalno… read more
Nooca BIOS cusboonaysiinta nooca American Megatrends Inc.
BIOS Update Nooca American Megatrends Inc. In kasta oo tirada badan ee Motherboard-yada la soo saaray, waxaa jira qaar ka mid ah iibiyayaasha chips BIOS iyaga. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan waa American Megatrends Incorporated, oo si fiican loo yaqaan gaabin AMI. Maanta waxaan rabnaa inaan kuu sheegno sida aad u cusbooneysiineyso nooca BIOS. Cusboonaysiinta… read more
Sida looga soo dejiyo fiidiyowyada gaarka loo leeyahay TikTok
Sida looga soo dejiyo fiidiyowyada gaarka ah TikTok TikTok ayaa durba ka mid ah shabakadaha bulshada ee aadka loo isticmaalo waqtigan. In waxa aad ka heli kartaa noocyo kala duwan oo videos, gaar ahaan madadaalo. Fiidiyowyadani waxay noqon karaan kuwo guud ama mid gaar ah, waxayna ku xidhan tahay nooca ay ka tirsan yihiin, lama soo dejin karo ama lama soo dejin karo. Fra Bots-ka Telegram-ka ugu fiican waxaa sidoo kale jira… read more
Kombuyuutarku markiiba wuu shidaa oo damiyaa
Kumbuyuutarku isla markiiba wuu shidaa oo dami doonaa Dhibaatada caadiga ah ee kombuyuutarku waa inuu shido oo damiyo isla markiiba (hal ama laba ilbiriqsi ka dib). Caadiyan sidan ayay u dhacdaa: badhanka korontadu waa la riixay, habka kor u qaadista ayaa bilaabmaya, dhammaan taageerayaashu way bilaabmaan, ka dib… read more
Sida loo ogaado haddii iPhone la jabsaday
Sida loo ogaado haddii iPhone la jabsaday Dhowr maalmood, aad applephone qaadataa waqti dheer si ay u bilaabaan codsi ama aad si fudud u leedahay dareen ah in qof ku basaaso on. Taasi waa sababta aad u raadinayso casharo si faahfaahsan u sharaxaya sida loo fahmo haddii iPhone la jabsaday. Anaga hadaanu nahay QuimeraRevo waxaanu samaynay casharo sax ah... read more
Nuqul xiriiriyaha ku muuji astaantaada Telegram ee ku saabsan Android, iOS, Windows
Nuqul ka samee isku xirka profile profile kaaga Android, iOS, Windows Si ka duwan kuwa fariimaha badan, ee Telegramka aqoonsiga isticmaalaha ma aha oo kaliya taleefoon lambarkiisa la isticmaalo marka la diiwaan gelinayo, laakiin sidoo kale magac gaar ah, kaas oo codsiga dhexdiisa sidoo kale loo isticmaali karo sidii isku xirka profile ah. Intaa waxaa dheer,… read more
Ku hagaaji qaladka "Aalad Bootable No" ah oo ku taal laptop Acer
Hagaaji qaladka "Aaladaha Bootable" ee Acer Laptop Xulashada 1: U deji darawalka sidii bootable Sababta ugu horreysa ee suurtagalka ah ee "Aaladda Bootable" ee Acer laptops, iyo kuwa kaleba, waa in BIOS uusan ka garanayn qalabku waa inuu kabo. . Tan waxaa badanaa sababa arrimaha soo socda: falalka… read more
Emulators Windows-ka loogu talagalay Android
Windows emulators for Android Sababo la xiriira awoodaha xaddidan ee aaladda Android, waxaa laga yaabaa inay lama huraan noqoto in la socodsiiyo nooca buuxa ee Windows sidii codsi gooni-gooni ah. Tani waa hawl macquul ah oo ay ugu mahadcelinayso horumarka firfircoon ee aaladaha casriga ah ee Android, kuwaas oo intooda badan aysan waxba ka masayrin kombiyuutarrada gaarka ah… read more
Sida looga soo kabsado ogeysiisyada la tirtiray ee iPhone
Sida loo soo ceshado ogeysiisyada la tirtiray ee iPhone Sababo la xiriira xawaaraha furitaanka ee aaladaha cusub ee Apple, haddii ay ku rakiban yihiin Touch ID ama aqoonsiga wajiga, iyo gaar ahaan Automation-ka aan isticmaalno isla marka aan taleefanka gacanta ku qabanno marar badan. telefoonka waanu furaynaa xitaa ka hor intaadan akhriyin ogeysiisyadayada. … read more
Sidee loo tirtiraa koontada Facebook iyada oo aan lahayn lambar sir ah iyo emayl?
Ma doonaysaa in aad ogaato sida loo tirtiro xisaabta Facebook-ga oo aan lahayn sirta iyo email? Kaliya ma rabto inaad sii wadato akoonkaaga Facebook, oo waxaad go'aansatey inaad gabi ahaanba tirtirto. Waxaan ku tusi doonaa tillaabooyinka aad raacayso si aad u ogaato sida loo tirtiro xisaabta Facebook iyada oo aan lahayn furaha iyo emailka? Sidee… read more
Windows 10 dib ayey u bilaabantaa xiritaanka, maxaan sameeyaa?
Windows 10 wuxuu dib u bilaabmaa xiritaanka, maxaan sameeyaa? Mararka qaarkood, waxaa laga yaabaa inaad ogaato marka aad riixdo "Shut down", ka Windows 10 kumbuyuutarka ama laptop-ka ayaa dib u bilaabaya halkii aad ka xiri lahayd. Taasi waxay tidhi, aqoonsiga sababta dhibaatada, gaar ahaan isticmaale cusub, badanaa ma fududa. Casharkaan wuxuu faahfaahinayaa waxa la samaynayo haddii Windows 10 uu dib u bilaabo... read more
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka nidaamka hawlgalka macOS
Faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka nidaamka hawlgalka macOS Isticmaalayaal badan ayaa ka fekeraya inay u guuraan alaabta Apple, gaar ahaan kuwa ka shaqeeya naqshadeynta, sawirada iyo warbaahinta badan. Aynu ogaano haddii macOS runtii aad ugu fiican yahay shaqada iyo madadaalada labadaba. Astaamaha nidaamka hawlgalka Apple Nidaamka hawlgalka ee gacanta… read more
Ka eeg taariikhda daalacashada Opera biraawsarka
Ka eeg taariikhda biraawsarkaaga Opera Taariikhda boggaga la booqday ee browserka Opera waxa ay kuu ogolaanaysaa in aad ku noqoto goobihii hore loo booqday xataa wakhti dheer ka dib. Qalabkan, waxaa suurtagal ah in aan "lumin" kheyraadka shabakadda ee qiimaha leh ee isticmaaluhu uusan markii hore fiiro gaar ah siin ama ilaawin inuu ku daro ... read more
MegaSearch: Sida loo raadiyo Faylasha ku jira MEGA
MegaSearch: Sida loo Raadiyo Faylasha MEGA Ma ka warqabtaa kartida cajiibka ah ee Mega laakiin waxaad la yaaban tahay sida loo raadiyo faylasha la geliyo adeeggan cajiibka ah? Ha ka welwelin: gudaha badda Magnum ee internetka waxaa jira xal sax ah, waxtar leh oo sahlan in la isticmaalo adiga. Waxaan ka hadleynaa MegaSearch. Mega waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan… read more
Sidee si toos ah looga daawan karaa barta Instagram iyada oo aan la arkin?
Sidee si toos ah loogu arki karaa Instagram-ka iyadoon la arkin? Nolosha Instagram waxay noqotay mid ka mid ah aaladaha ugu wanaagsan ee arjiga caanka ah uu siiyo isticmaaleyaasheeda. Kuwa caanka ah ee aan caanka ahayn waxay isticmaalaan muuqaalkan cajiibka ah si ay si toos ah ugu baahiyaan oo ay ula xiriiraan dhammaan taageerayaashooda. Laakiin… read more
Rutracker.org ma shaqeyneyso - waa maxay iyo maxaa la sameeyaa?
Rutracker.org ma shaqeynayo - sababta iyo waxa la sameeyo? Tan iyo bilawgii Abriil, isticmaaleyaal badan oo Ruush ah rutracker.org ayaa la kulmay xaqiiqda ah in rutracker uusan furmin. Cusboonaysiinta 2016: Ilaa hadda, rutracker.org tracker torrent ayaa laga xannibay Ruushka bixiyeyaasha adeegga internetka sida ay… read more
Isticmaalaha kale markaad gasho Windows 10: sida loo saxo
Isticmaalaha kale ee soo galaya Windows 10 - Sida loo hagaajiyo Isticmaalayaasha qaarkood waxay ogaadaan in "Isticmaal kale" (ama Isticmaale Kale) uu ka soo muuqdo shaashadda soo dhaweynta oo ku dhiirigelisa inay galaan magaca isticmaalaha iyo erayga sirta ah, laakiin fadhiga bilowga ma dhaco marka waad soo gashaa... read more
Ku gal "Mode Safe" adoo adeegsanaya BIOS
Gelida "Mode Safe" iyada oo loo marayo BIOS "Mode Safe" waxay ku lug leedahay boot xaddidan oo Windows ah, tusaale ahaan booting iyada oo aan lahayn darawallo shabakad. "Qaabka nabdoon" ayaa loo baahan yahay oo kaliya si loo xalliyo dhibaatooyinka nidaamka dhexdiisa, sidaas darteed ma fiicna shaqada joogtada ah ee OS (wax ka beddelka dukumeenti kasta, iwm.). Habka… read more
Sida loo galo BIOS Windows 8 (8.1)
Sida loo galo BIOS gudaha Windows 8 (8.1) Casharradan – 3 siyaabood oo loo galo BIOS marka la isticmaalayo Windows 8 ama 8.1. Dhab ahaantii, waa qaab siyaalo kala duwan loo isticmaali karo. Nasiib darro, fursad uma helin inaan isku dayo dhammaan siyaabaha lagu qeexay BIOS-ka caadiga ah... read more
Xiriirada Google lagu kalsoon yahay: Waa maxay iyo sida loo adeegsado
Google Trusted Contacts: waxa uu yahay iyo sida loo isticmaalo Waxaa ka mid ah waxyaabo badan oo tignoolajiyada ay ku guulaysatay inay horumariso, shaki la'aan, amniga. Suurtagalnimada in lala xiriiro qof kasta wakhti kasta, in la dhaqaajiyo ama la damiyo walxaha dhabta ah ama farsamada fog, awood u yeelashada in la dhaqaajiyo tallaabooyinka ilaalinta kale read more
Xuanlong Fallout 3 Qoryaha Weerarka: Astaamaha
Marka xigta maqaalkan waxaan ku ogeysiin doonaa dhammaan faahfaahinta ugu muhiimsan ee ku saabsan Fallout 3 Xuanlong Assault Rifle. Ma seegi kartid dhammaan macluumaadka aan kuu hayno. Fallout 3 Xuanlong Assault Rifle Fallout 3 Xuanlong Assault Rifle waa la sameeyay oo nashqadeeyay mahadna waxaa leh koox horumariye ah oo ka socota… read more
Sidee loo furaa kanaalka telegram ee iPhone?
Sida loo xannibo kanaalada telegram iPhone? Telegram waa mid ka mid ah shabakadaha bulshada ee ugu xiisaha badan ee suuqa ka jira, waxa aad ka heli kartaa taxane door ah iyo faa’iidooyin ay qaar badan oo ka mid ah shabakadaha bulshadu ku siinayaan marka la isku daro, inkasta oo aanu ahayn midka ugu caansan ee isticmaala shabkada bulshada,… read more
Sida loo kaydiyo Windows 11 Wadayaasha
Sida loo tirtiro sawirka gudaha Windows 10 iyo Windows 11 search
Ku cusboonaysiinta Internet Explorer ee Windows XP
Sida loo nadiifiyo xusuusta RAM ee iPhone
Abuuritaanka qaab qurux badan oo Windows 10 ah
Sida loo xaliyo qaladka 0xc00d36c4 gudaha Windows 10
Sida loo daaro ilaalinta nidaamka gudaha Windows 10 iyo Windows 11
Soo hel faylalka ugu dambeeyay ee lagu kaydiyay kombayutarka
"Ma abuuri karo shaqo daabac" qaladka gudaha Windows 10
Ka soo rar sawirada iCloud iPhone kaaga
Sida loo tirtiro koontada Microsoft ee Windows 11
Ku guul daraystay in uu nuqul ka sameeyo bcdboot files boot – sidee loo hagaajiyaa?
Sida loo soo dhoofiyo xiriirada ka Gmail in iPhone?
Sidee ballan looga qabsan karaa Isste?
Sidee loo sameeyaa biyaha ubaxa ee guriga lagu sameeyo?
Sida loo saaro ciddiyaha?
Sida loo soo ceshado erayga sirta ah ee Hotmail?
Sidee loo dhejiyaa cabbirada Autocad?
Sidee loo sameeyaa sunniyaha baadiyaha ah?
Sida faylalka waaweyn loogu wareejiyo USB?
Sida loo sameeyo garaafyada Excel?
Sida loo rakibo Oracle?
Sidee loo naqshadeeyaa martiqaadka arooska?
Sidee loo dabciyaa fur daxalaystay?
Sidee loo yareeyaa wareegyada madow iyo bacaha indhaha hoostooda?
Sidee bay barcode-ku u shaqeeyaan?
Sidee loo helaa xargaha heesta?
Sidee timahaaga timaha looga saaraa?
Sideen u bedelaa xidhiidhka Facebook?
Sidee loo ogaadaa cinwaanka IP-ga ee internetkayga?
Sidee loo sameeyaa baaldi?
Ku samee gifs iPhone
Ka samee gifs muuqaal ku jira iPhone
Sidee meesha looga saaraa xiriirka?
Sida loo balaadhiyo ama loo dhimo sawirada desktop-ka iyo galleyda gudaha Windows 11
Iska yaree cabbirka sawirada iPhone
Sida loo beddelo xallinta sawirka iPhone
Hagaaji qaladka 0x800f0988 gudaha Windows 10
Sida loo furo saxanka?
Sidee darbiga loo dhejiyaa?
Sidee loo mariyaa hooska isha?
Sidee sawir looga qaadaa shaashadda taleefanka gacanta?
Sidee loo xisaabiyaa itimaalka?
Sidee looga dhigi karaa nin ku xiisay?
Sidee uga dhigi kartaa inaadeerkaaga inuu jacayl kuu qaado?
Sidee loo sawiraa isla'egta toosan?
Sidee wax looga qabtaa dhibaatooyinka neerfaha?
Waa maxay xargaha ledhka iyo sida loo gooyo?
Bogga1 Bogga2 ... Bogga389 Xiga →
Android Barashada Consolas Riyooyin Sidee Sida loo sameeyo Sidee looga soo kabtaa Facebook firmware Google Google Chrome Instagram Tilmaamaha Internet Explorer Internetka iyo Browsers-ka macruufka iTunes Ciyaaraha Linux macOS / IOS / Apple Mozilla Firefox Mobiles Opera Muuqaalka Photoshop Play Store Barnaamijyada Dayactirka Kumbuyuutarka Amniga iyo Fayraska Skype Xalka Xalka Windows Sony vegas Spotify Steam telegraam Viber WhatsApp Windows Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows XP Youtube Zoom
© 2022 IK4.es. Dhammaan xuquuqaha way xifdiyeen
Jooji Hal-abuurka Dhammaan Ku Saabsan Tignoolajiyada
A Sida Loo.